Ardayda waxkabarta dugsiga H/Dhexe, iyo Sare ee Al-Bilaad ee Muqdisho...
Nadwo ku saabsan Guusha Muslimiinta: Adduun & Aakhiro.. Xaggee, Goorma... Guji
Wararkii: Dec 16, 2006
C/llaahi Yuusuf oo sheegay in ay xirmeen Albaabadii waan waanta..
Maxkamadaha oo si kulul uga jawabay hadalkii Dowlada Mareykanka..
Sheekh Fu’aad “Mareykan, Ingiriis iyo Itoobiya waan ka guuleysan doonaa Haddi Eebe..
Maxaa ka soo baxay kulankii ka dhacay Nayroobi...
Geeddi oo Magaalada Nayroobi kulan kula yeeshey Saraakiil..
Maxkamad Islaami ah oo looga dhawaaqay Degmada Caabutwaaq
Dallad ay ku mideysan yihiin Toban Dugsi looga dhawaaqay
Madxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed oo shalay Xarunta Madaxtoonyada Magaalada Baydhabo kula hadlayey Saxaafadda ayaa waxa uu sheegay inay dhamaadeen wada hadalkii iyo waan-waantii laga dhex waday Maxaakiimta iyo Dowladda Federaalka. “Lagama yaabo in aan mar kale isa soo hor fariisanayo oo aan wada hadal la yeelanayo Maxaakiimta” ayuu yiri C/llaahi Yuusuf oo sheegay in Maxaakiimtu ay yihiin kooxo argagixiso oo doonaya inay dalka ku horseedaan burbur iyo baaba’a.
Xiliga hadalka Madaxweynuhu uu ku soo beegmay waxa uu ahaa xili ay Golaha Maxaakiimta Islaamiga ah u qabteen todobo maalmood in ay Ciidamada Itoobiya uga baxaan dalka Soomaaliya, waxa uuna sheegay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed in ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya ay yihiin kooxo tababarayaal ah oo doonaya inay dib u soo noleeyaan ciidankii Booliiska Soomaaliyeed. Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed ma uusan caddeyn waxyaabaha lagu bedelayo wada hadalka in ay tahay dagaal ay Dowladdu la galeyso Maxaakiimta, hase yeeshee waxaa laga dhedhansanayaa in Madaxweyne C/llaahi Yuusuf uu doonayo in uu dagaal qaraar la galo Maxaakiimta isagoo adeegsanaya Ciidamada Itoobiya.
Hadalka C/llaalhi Yuusuf ayaa waxa uu ku soo beegmay xili ay Dowladda Mareykanku sheegtay in hogaanka sare ee Maxaakiimtu ay xiriir la leeyihiin Ururka Al-Qaacida, waxay kaloo Dowladda Mareykanku sheegtay in Kooxo argagixiso Ah ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qaraxyo ka gaystay safaaradihii Mareykanku ku lahaa wadamada Tanzaaniya iyo Kenya, hase yeeshee Maxaakiimta ayaa iyagu beeniyey hadalkaasi kuna tilmaamay kuwo lagu baneysanayo in Soomaaliya lagu qabsado.
Maxaakiimta Islaamiga ah ayaa si kulul uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray Dowladda Mareykanka ee ahaa in ragga ugu sareeya Maxaakiimta ay yihiin kuwo xiriir la leh ururka Al-Qaacida, waxa uuna Goluhu hadalkaasi ku tilmaamay mid sal iyo raad toona aan lahayn.
Golaha Maxaakiimta waxay sheegeen in aysan wax xiriir ah la lahayn kooxahaasi, iyagoo sheegay in Mareykanku uu marmarsiyo uga dhigayo sidii uu Maxaakiimta weerar uqu soo qaadi lahaa isagoo adeegsanaya Dowladda Itoobiya.
“Waxaan ku martiqaadeenaa Dowladda mareykanka in ay timaado deegaanada ay ka taliyaa Maxaakiimta si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta” ayey yiraahdeen golaha Maxaakiimta oo sheegay inay iska difaaci doonaan cid kasta oo ku soo gardaroota.
Golaha maxaakiimtu waxay kaloo sheegeen in ay weli sideedii u taagan tahay todobadii maalmood ee loo qabtay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Dalka Soomaaliya. Haddii ay ka bixi waayaana ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo ad u balaaran, hase yeeshee Dowladda Itoobiya ayaa warkaasi ku tilmaantay mid aan waxba soo kordhineyn, balse sii hurinaya xaaladda ka taagan dalka Soomaaliya.
Sheikh Fu’aad Max’ed Khalaf oo ah Xoghayaha Maxaakiimta ee dhinaca Dhallinyarada iyo Waxbarashada ayaa mar uu ka hadlayey xaflad lagu dhisayey Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, waxa uu sheegay in Golaha Maxaakiimta oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ay iska difaaci doonaan cid kasta oo ku soo gardaroota dalka Soomaaliya.
“Itoobiya waxa dabada ka riixaya waan og nahay oo waa Mareykan iyo Ingiriis, inshaa-Alaah waanu ka guuleysan doonaa” ayuu yiri Sheekh Fu’aad oo intaa raaciyey “Waxyaabaha nalagu haysto waxaa weeye maxaad ugu dhaqmeysaan Shareecadda Islaamka oo aad illaahey u caabudeysaan”.
Sheekh Fu’aad oo ka yimid dalka dibaddiisa ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Didabaha ay yihiin kuwo diyaar u ah inay wadankooda ka difaacaan caddowga Itoobiya.
Waxaa shalaya Nayroobi lagu gabagabeyeeyey kulan socday labo maalmood oo ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Harooyinka, waxaana shir guddoominayey Madaxwey-naha wadanka Kenya Kipaki.
Kulankaan ayaa gebagabadiisii waxaa laga soo saaray baaq loo jeediyey Dowladda Federaalka iyo Golaha Maxaakiimta oo ah in ay isugu yimaadaan kulan deg deg ah oo looga arrinsanayo arrimaha ka taagan Soomaaliya, waxaana loo soo jeediyey in wixii khilaaf ah ay ku xaliyaan wada hadal.
Max’ed Cali Geeddi oo filayey in kulankaasi looga hadlo sidii Soomaaliya loogu diri lahaa ciidamo ka socda Afrika ayaa ayaa halkaasi ku hungoobay kaddib markii wadamadaasi ku ekaadeenin Xaladda Soomaaliya lagu dhameeyo wada hadal iyo is afgarad, hase yeeshee xogahayaha Midowga Afrika Alpha Omar Conary ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay deg deg ugu baahan tahay ciidamo nabad ilaalin ah oo gacan siiya Dowladda Federaalka ee fadhigeedu yahay Baydhabo.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Nayroobi ee dalka Kenya waxay sheegayaan in uu Ra’isul Wasaare Cali Max’ed Geedi uu Magaalada Nayroobi kulan kula yeeshay saraakiil ka socotay Dowladda Mareykanka, waxaana kulankaasi la iskula soo qaaday xaaladda Soomaaliya, iyo qaabka ugu haboon ee ciidamada Afrikaanka ah loo keeni karo Soomaaliya. Ra’isul Wasaare Geeddi ayaa waxa uu ka dalbaday Dowladda Mareykanka in la dedejiyo ciidamada Nabad ilaalinta ee loo dirayo Soomaaliya, maadaama xaaladda Soomaaliya ay haatan tahay mid halis ah.
Ra’isul Wasaaruhu waxa uu sheegay in haddii aan ciidamadaasi dhaqsi loo keeni Soomaaliya ay Soomaaliya halis u tahay inay la wareegaan wax uu ugu yeeray kooxo Argagixiso.
Warar ayaa waxay sheegayaan in Ciidamda loo soo dirayo Soomaaliya loo la’ yahay qarashkii ay ku hawlgali lahaayeen, waxaana la sheegay in Ra’isul Wasaare uu ka codsaday Mareykanka inay bixiyaan qarashaadka ku baxay ciidamada nabad ilaainta,. Gaar ahaan dhinaca daadgureynta oo uu sheegay Ra’isul Wasaare in ay tahay mid aad u culus, waxayna labada dhinac isku mowqif ka noqdeen in Soomaaliya ay ku sugan yihiin kooxo argagixiso ah.
Maxkamad Islaami ah ayaa maalintii shalay ahayd laga furay magaalada Cabud-Waaq ee Gobalka Galguduud, waxaana ka qaybgalay munaasabaddii lagu furayey culima’udiin ka socday Golaha Maxaakiimta Islaamigaa, Waxgarad iyo Odoyaal ka soo jeeda Deegaankaasi.
Dadweynaha ku nool degmada Cabud-Waaq ayaa si weyn u soo dhaweeyay furitaankii Maxkamaddaasi kuna tilmaamay inay tahay mid wax ka qabaneysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadaasi.
Dhawaan ayaa Maxaakiimta Islaamiga ah gacanta ku dhigeen degmada Cabud-Waaq kaddib markii arrintaani ay ka wada hadleen Odoyaasha Deegaanka iyo Maxaakiimta Islaamiga ah.
Warar ayaa waxay sheegayaan in Maxaakiimta Islaamigu ku sii siqayaan degmada Balanbale oo aan sidaasi uga fogey, basle waxaa halkaasi ka dhow ciidamada Itoobiya oo iyagu mudo haystay degmadaasi, basle markii dambe dib u gurusho sameeyay kadib markii ay si aad ah ugu soo dhawaadeen ciidamada Maxaakiimta Islaamiga ah oo iyagu isk baahina dhamaan gobalada dalka.
Ciidamo ka Gadooday Dowladda Federaalka oo xaley lagu soo dhaweeyey ..
Waxaa habeenkii xalay ahayd Magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay ciidamo iyo tikniko kaddib markii ay ka soo goosteen Dowladda Federaalka oo ay m,udo ku sugnaayeen Magaalada Baydhabo.
Ciidankaan oo ka koobnaa 100 Askari ayaa waxay wateen lix gaari oo saddex yar yar tahay saddexna ay waaweyn tahay, waxaan saraakiishii la socotay ay xalay caddeeyeen in ay ku soo biireen maxaakiimta islaamiga ah iyagoo ku tilmaamay kuwo ku taagan xaq.
Ciidamadaani waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay la dagaalamaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya, waxayna codsadeen in la geeyo safka hore ee dagaalka.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ay ka soo baxsadaan, dhawaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ay u soo goosteen dhinaca Maxaakiimta, waxayna Dowladda Federaalka dhankeeda sheegtay in ciidamo ka tirsan Maxaakiimta ay dhankooda u soo goosteen, basle markii la baaray la ogaaday inay ahaayeen ciidamo beeleed ka koobannaa 13 askari
Waxaa maalintii Khamiista ahayd xarunta HADHSO ee Magaalada Muqdisho looga dhawaaqay Dallad ay ku mideysan yihiin toban dugsi oo ah noocaha waxbarashada aan tooska aheyn, waxaana lagu magacaabaa NESON.
Xafladdii lagu dhisayey dalladdaasi ayaa waxaa ka qaybgalay maamulada Dugsiyadaasi, Waalidiinta iyo Ardayda wax ka barata, waxaana la sheegay in sababaha loo dhisay dalladdani ay tahay sidii iska warqab uga yeelan lahaayeen dhinaca Waxbarashada.
Guddoomiyaha Dalladda ayaa waxaa loo doortay Max’ed Cusmaan (New York), waxa uuna sheegay in dalladaani ay ka shaqeyn doonto sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada Soomaaliyeed, maadaama dugsiyada noocaan ahi ay yihiin kuwa ay ka soo dhismaan waxbarashada aasaasiga ah, waxaa kaloo ka hadlay xoghayaha dalladda Max’ed Nuur Cali oo isna sheegay in dalladdaani ka tarjumeyso sidii ay u xoojin lahaayeen waxbarashada Carruurta Soomaaliyeed, waxa uuna u mahadceliyey intii ka soo shaqeysay Dalladaasi.
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 16, 2006
8 Askari oo ka fakatay Itoobiya oo Gaarey Eritrea
Askarta ka fakatay Itoobiya
Sida ay faafisay wasaaradda warfaafinta ee Eritrea, siddeed (8) askari oo ka fakaday ciidanka Itoobiya ayaa gaarey dalka Eritrea, askartaas oo sababta ay u soo fakadeen ay tahay iyagoo ka soo horjeeda weerarka xukuumada Tigreega (TPLF) ay ku tahay Soomaaliya. Mid kamid ah askarta oo magaciisa la yiraahdo Alelign Simeneh ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada in ciidamo ka tirsan Itoobiya oo galeen gudaha Soomaaliya iyagoo ku xad gudbaya xornimada dalka Soomaaliya, waxana uu intaas ku daray in xukuumada Itoobiya ay xabsiga u taxaabtay saraakiil, askar, iyo shaqaale caafimaad kaddib markii laba sarkaal ay ka fakadeen Itoobiya.
Siddeeda askarta ah magacyadoodu waa: Kamel Kemalo Sheik, Hassan Mohammed Ibrahim, Wegari Gidina Mokjera, Abyot Sheferaw Hunde, Teyib Haji Temam Suleiman, oo ah qabiilka Oromo, iyo Alelign Simeneh Gezu & Adane Mekuanint Ayichew, oo ah Amxaara ah iyo Abdi Saleh Mohammed oo ah Tigrayan.
Isha: Wasaarada Warfaafinta Eritrea.
Kulankii Engineerada Soomaaliyeed
Kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah Engeneeerada Soomaaliyeed ee Dalka ku sugan ayaa.. Akhri... Dec 15
Fatahaadda Webiga ee Degmada Afgooye Yaa U maqan?